वसन्त Basanta 巴萨塔 バサンタ : कथा- "एउटा सुन्दर यात्रा"
“तँलाई बदमाश, के ग-या यस्तो?!” म उसलाई तानेर बाहिर निकाल्छु र भिजेका लुगा सबै फुकाल्दिन्छु। ऊ अब झन खुशी भएर बाथरुमतिर पस्छे। 'भएन, नुहाइदिनै प-यो।' हरेक दिन साँझमा नुहाईदिने गरेको छौं, बिहान त्यति नुहाइदिएको छैन।
Posted by Basanta at 2:39 PM
weyouth September 8, 2007 at 8:41 PM
basanta September 9, 2007 at 4:27 PM
Prajwol September 11, 2007 at 4:41 AM
लेख धेरै राम्रो र जीवन्त लाग्यो बसन्त जी.......सानो बच्चाहरु मलाइ सार्है मन पर्छ, तर उनिहरुको मुड ठिक भएको बेला मात्र :).. अरु बेलाको लागि चाहिने धैर्य मेरो अझै पुगि सकेको छैन जस्तो लाग्छ :)
काम लगायत सानो बच्चाको हेरचाहरको वाबजुद ब्लगलाइ तपांइले दिनु भएको समय सार्है सर्हानिय छ
Dilip Acharya September 12, 2007 at 1:41 PM
रमाईलो र अर्को शब्द प्रयोग गर्नु पर्दा एकदमै "घरेलु" लाग्छ मलाई यो सबै । प्राय: सबै पढने गरेको छु तर "कमेन्ट" लेख्‍न चाँहि सधै अल्छी लागेर नलेखेको हो । पछिल्लो २ लेखमा त कतै कतै धेरै हद सम्म आफ्नै अनूभुति पनि भेटेको छु । हुन त मेरो "लाईफ" त्यत्ती व्यस्त छैन तर हतार भएको बेलामा बच्चाको कारणले धेरै चोटी यस्तै अनुभव संगालेको छु । कहिले काहीँ आफ्नै बल्ग पनि शुरु गरौं कि जस्तो पनि लाग्छ तर यौटा कमेन्ट लेख्‍न त यसरी "साईत" जुर्नु पर्नेले के ब्लग चलाउनु हैन ? Rest of the thngs are fine. दिलीप आचार्य
unfoldingreverie September 17, 2007 at 11:02 PM
सार्है मजाले लेख्नु भएछ, मनै छुने गरि। अहिलेलाई त भावनात्मक समर्थन मात्र भए पनि, पछि आफ्नै छोरा छोरी हुँदा निकै नै काम लाग्ला जस्तो छ, तपाँईको यो लेख।
"'ब्लग' मा केहि नलेखेको हप्ता कट्न आँटिसक्यो (बेकारमा थपिएछ यो बोझ जिन्दगीलाई!)"
यो कुरामा सहमति न जनाइ त रहनै सकिँन।
basanta September 18, 2007 at 11:42 AM
प्रज्वलजी, Prof. LOL जी, धन्यबाद छ मन पराइदिनु भएकोमा।
छोरी हुर्किसकेपछि सबै बिर्सिएला भनेर अहिलेको अनुभवलाई लेखिराखेको। पछि हेर्दा रमाईलो होला।
अनि तपाईँहरुलाई पनि छोरा-छोरी हुर्काउँदा अलिअलि काम लाग्यो भने पनि झन राम्रो भो!
दीपक जडित May 24, 2010 at 3:45 PM
साँच्चै सुन्दर यात्रा ।